'Kumele luyiswe kweyoMthethosisekelo olwaseNkadla' | News24
'Kumele luyiswe kweyoMthethosisekelo olwaseNkadla'
Johannesburg - UMvilkeli woMphakathi uThuli Madonsela umile kwelokuthi uMengameli uJacob Zuma kumele akhokhe ingxenye ethile yemali okwalungiswa ngayo umuzi wakhe oseNkandla, waphinde waphakamisa ukuba lolu daba ludluliselwe eNkantolo yoMthethosisekelo.
UMadonsela uthi umbiko kaNgqongqoshe wamaPhoyisa uNkosinathi Nhleko mayelana neNkandla unokushayisana, unamaphutha futhi awunalo iqiniso.
“Umbiko unamaphutha amaningi futhi awuwona usomqulu omuhle,” usho kanje.
Funda nalolu daba: Inkantolo ichithe isicelo senkampani yezindiza
UMadonsela uthi uzobhalela umengameli ameluleke ngokuthi enze isinqumo esifanele ngodaba lwaseNkandla, usho kanje engxoxweni abenayo nabeSAFM ngoMsombuluko.
UMvikeli woMphakathi uphinde wathi kumele lolu daba luyiswe eNkantolo yoMthethosisekelo ukuze icacise ngamandla ehhovisi lakhe, kubika iSABC.